ACCESS နှင့် EKT မိတ်ဖက်များသည်မျိုးဆက်သစ်တီဗွီနှင့်ဗွီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ACCESS နှင့်နောက်မျိုးဆက်တီဗီနှင့်ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုများကိုရိုးရှင်းဖို့ EKT မိတ်ဖက်
အမ်စတာဒမ်, 13 စက်တင်ဘာလ 2019 - ။ ACCESS, LTD နှင့် EKT ယနေ့သူတို့ကပေါင်းစပ်ဖို့သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်တိုးချဲ့ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် NetRange လျှောက်လွှာ Store ကလာမယ့်မျိုးဆက်တီဗီနှင့် OTT စားသုံးသူအတွေ့အကြုံများကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ apps များထောင်ပေါင်းများစွာ၏တစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကက်တလောက်အတူနေတဲ့ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ချထားစမတ်တီဗီစတိုးဆိုင်။ အဆိုပါဖြေရှင်းချက် EKT ရပ်တည်ချက်အပေါ်ပွဲဦးထွက်စေမည် #1.D11 at IBC ပြရန် 2019 (13 -17 စက်တင်ဘာလ, အမ်စတာဒမ်) ။
နေရာတိုင်းမှာတီဗီခေတ်မှာတော့အော်ပရေတာများအတွက် key ကိုစိန်ခေါ်မှုအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှုပ်ထွေး interfaces, load လုပ်ဖို့အချိန်အနည်းငယ်ကြာကြောင်းကန့်သတ်ရရှိနိုင်မှုနှင့်အီလက်ထရောနစ်အစီအစဉ်ကိုလမ်းပြမရှိတော့ digital natives များအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီနှစ်ခုနှင့်အတူတစ်စိတ်ကြိုက်ပလက်ဖောင်းစတင်ခဲ့သည့်အခါ ACCESS နှင့် EKT အကြားမိတ်ဖက်သည်ဤပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကြေငြာခဲ့သည် DTVKit နှင့် နှစ်လုံးကိုလည်း၎တိုးချဲ့ပူးပေါင်း '' ACCESS နှင့်အတူပေါင်းစပ်, NetRange မကြာသေးမီက ACCESS ကဝယ်ယူတဲ့ကုမ္ပဏီကနေလျှောက်လွှာ Store ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည် NetFront ™ Browser ကို BE နှင့် EKT devices များနှင့်သတ်မှတ်ပြီးထိပ်တန်းသေတ္တာများ။ အဆိုပါပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းချက်မကြာခဏကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံအတော်များများဖြတ်ပြီး span ထားတဲ့ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီးမျိုးစုံဖြေရှင်းနည်းများ, ဒီဇိုင်းတီဗီအော်ပရေတာဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖယ်ရှားပေးပါသည်။
"ဒီဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်စားသုံးသူယခုထုတ်ကုန်တွေရဲ့ array ကိုဖြတ်ပြီးမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးန်ဆောင်မှုများ၏နံပါတ်ကိုရယူသုံးမှနေသားတကျဖြစ်ကြပြီးသူတို့ထိုသူအပေါင်းတို့အပေါ်အလွန်အမင်းကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများမျှော်လင့်ထားဆိုလိုတယ်," ရစ်ချတ်စမစ်, EKT ၏ CEO ဖြစ်သူဒီတွေအများကြီးထား "ဟုပြောသည် အချိန်စားသုံးခြင်းနှင့်စျေးကြီးဖြစ်နိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောဖြေရှင်းချက်၏နံပါတ်တည်ဆောက်ရန်အော်ပရေတာအပေါ်ဖိအား။ တစ်ဖန် ACCESS နှင့်အတူတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့အရည်အသွေးပေါ်မထိခိုက်စေဘဲကုန်ကျစရိတ်များလျော့နည်းစေတဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့အော်ပရေတာပေးခွငျးဖွငျ့ဤအကြောင်းအရာပေးပို့ပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်လိမ့်မည်။ "
တစ်ဦး EKT ACCESS '' NetFront Browser ကိုအတူပေါင်းစည်း set-top box ကို™ BE ချိတ်ဆက်လျက်, NetRange လျှောက်လွှာ Store က
The joint solution is based upon EKT set-top boxes and ACCESS solutions including HbbTV interactivity, DLNA media sharing, browser solutions andafully featured Appstore, which supports over 2500 linear channels, 1000 applications, over 100 VOD services in over 100 countries. It has been developed to provideapowerful and flexible technology platform, providing operators with an alternative to Android TV. It guarantees the best level of service for operators of all sizes by simplifying the creation and management of services for any middleware, any content and any device. This provides operators with unique know-how of the subtleties and necessary elements that must be combined to createaunified, yet highly customizable service for next generation set-top boxes and devices.
"EKT နှင့်အတူပူးပေါင်းကျနော်တို့အော်ပရေတာအပိုဆောင်းအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဗီဒီယိုန်ဆောင်မှုများရာချီပေးဘို့အကာမယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူသောလမ်းပေးနိုငျခွငျးကိုဆိုလိုသမသက်ဆိုင်စက်ပစ္စည်း၏ viewer ကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်" ဟုဒေါက်တာ Neal Foster, Access ဥရောပ၏ CEO ကဗီဒီယိုအရေအတွက် "ဟုပြောသည် ကြီးမားသည်, အော်ပရေတာတိုင်းတစ်ခုတည်းစက်ကိရိယာနှင့်ပလက်ဖောင်းများအတွက်ဖြေရှင်းချက်တည်ဆောက်နှင့်အတွေ့အကြုံ၏တူညီသောအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်ထိုသို့မဖြစ်နိုင်သလောက်ပင်ဖြစ်သည်ယနေ့ applications များ -enabled ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးတွဲဖြေရှင်းချက်အော်ပရေတာကနေဒီဖိအားကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်စားသုံးသူများသူတို့မျှော်လင့်ထားခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောကိုယ်ပိုင်တီဗီအတွေ့အကြုံများကိုလက်ခံရရှိကြောင်းသေချာစေရန်လိမ့်မည်။ "
အဆိုပါ 1980s စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းက ACCESS အစဉ်မပြတ်၎င်း၏ထုတ်ကုန်အစုစုကိုတလျှောက်လုံးစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများထောက်ပံ့ရန်၎င်း၏ကတိကဝတ်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ယနေ့ဆုရ NetFront ™ Browser ကိုမိသားစု နှင့် ACCESS ကြိုး™ဖြေရှင်းချက် HTML5, HbbTV 1.5, HbbTV 2.0.1, BML, Hybridcast, ဗြိတိန် Freeview Play စ, YouTube ကို TV ပေါ်မှာခြင်းနှင့် uPnP အဖြစ်ထိုကဲ့သို့သော Linux ကို, iOS နဲ့ Android အဖြစ် device ကို operating system မြားကိုထောကျပံ့။ မော်တော်ယာဉ်နှင့် IoT ကဖေးတွေမှာအပိုဆောင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူ ACCESS စဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ချိတ်ဆက်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဖြေရှင်းနည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။
အယ်ဒီတာများမှမှတ်ချက်: နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသို့မဟုတ် IBC မှာ ACCESS ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှင်းလင်းစီစဉ်ဖို့ပလက်ဖောင်းဆက်သွယ်ရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
ဝင်ရောက်ခွင့် အထောက်အပံ့ EKT ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor IBC OTT စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC TV က Ultra HD ဖိုရမ် 2019-09-13
ယခင်: Bluefish444 KRONOS K8 အခုတော့သင်္ဘောဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
နောက်တစ်ခု: အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ Network18 သွက်လက်, အနာဂတ်-အဆင်သင့်စစ်ဆင်ရေးမူတည်ပြီးမှမြက်ချိုင့်ဖွင့် iTX ပလေးအောက်ကိုအပေါ် Standardizes